DAAWO: Abdirahman Abdishakuur oo farriinta todobaadka uga hadlay xaalada dalka. - Caasimada Online
Home Warar DAAWO: Abdirahman Abdishakuur oo farriinta todobaadka uga hadlay xaalada dalka.
Abdirahman Abdishakuur oo safka hore uga jira musharixiinta ugu cad cad ee u taagan xilka Madaxweyne ee Soomaaliya, ayaa waxaa uu soo saaraa todobaadkasta farriin uu kula hadlayo shacabka Soomaaliyeed, taasi oo ka hadleysa xaalka dalka uu marayo.
Farriinta todobaadkan oo noqoneysa midii labaad ee uu soo saaro ayuu uga hadlayaa kaalinta looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed ee ah inay isku tashadaan, oo aysan isku haleyn wax uga yimaada dibada un.
Haddaba, farriintan oo meelo badan taabaneysa halkan hoose ka daawo :